Haybaashiyadii Jahligu Dilay! – Vol: 01 – Cad: 25 – Indheergarad
HomeMaqaalloHaybaashiyadii Jahligu Dilay! – Vol: 01 – Cad: 25
September 10, 2019 Khadiija Maxamed Eeshiya Maqaallo 0
Death of Hypatia in Alexandria. The Greek mathematician and astronomer Hypatia of Alexandria (c.370-415 AD) was the first notable female scientist. She taught Neoplatonic and Aristotelian philosophy and wrote several works on mathematics and astronomy. Her ideas were frowned upon by the new religions, and during a riot she was brutally murdered by a Christian mob. Artwork from the 19th century book Vies des Savants Illustres.
Indheergarad – Sebtembar 10, 2019 – Lamtako – Vol: 01 – Cadadka: 25
Haybaashiya waxa ay ahayd gabadh noolayd sannadihii (370 – 415-kii) miilaadiga sida ay qabaan taariikhyahannada badankood. Haybaatiya (Hypatia) waa magac laatiin ah micnihiisuna uu noqonayo tii sarraynta u saaxiibka ahayd. Taariikhda inta la ogsoon yahay faylasuufadii reer Masar ayaa ahayd cidda keliya ee magacan ku suntanayd abid. Xisaabyahannadii noolayd waqti aan ku habbooneyn, Haybaatiyadii Jeclayd fekerka, caqliga, is wayddiinta iyo raadinta asalka wax kasta. Mucaashaqadii xiddigaha, dayaxa iyo dabeecadda.
Da’adeedu markii ay ahayd ku dhawaad labaatan sanno ayuu aabbeheed caalamkii xisaabaadka ee Theon u diray jaamacad ku taalla Rooma, taas oo ay ka soo baratay Cilmiga xisaabaadka (Mathematics) iyo Falsafadda (Philosophy). Sidoo kale caan ku noqotay aqoonta falagga (Astronomy). Kolkii ay Habaatiya soo dhammaysatay waxbarashadeedii waxay jebisay xeer weligii guun ku ahaa Masiixiyiinta dhexdooda, waxay noqotay maamulihii ugu horreeyay ee jaamacada Alexandria ugu weyn! Taas oo ay mar walba raggu lahaan jireen iyaga oo u arka dumarka abuur liidata caqli & jir ahaanba. Markii ay ku guuleysatay Habaatiya jagadaas wax badan oo quudhsi, cadaadis, Iyo cunfi ah oo Haweenka Alexandria lagu hayay ayaa sidii hore ka soo debcay.
Gurigeedu wuxuu noqday Isha cilmiga, majaalis waaweyn ayaa ay yeelatay, taas oo ay wax ku bari jirtey qaybo ka mida aqoondoonayaashii reer Alexandria. Waxa ay noqotay bare aad loo qaddariyo. Filasoofaddu waxa ay ku dadaashay waqti badanna gelisay dib u cusbooneysiinta aragtida (Neoplatism). In kasta oo ay wax badan lumeen, haddana Haybaatiya dhanka xisaabaadka waxa ay ka tagtay aragtiyo illaa maanta laga isticmaalo caalamkan cusub sida; Hydro meter (Density of liquids) Motion of moon and stars, Arithmetic and Geometry.
Haybaatiya waxa ay ahayd qof neceb rumeysnaanta joogtada ah ee aan mandiqa ku qotomin, jecelna wayddiinta iyo raadinta asalka wax walba. Mar kale waxa ay ka mid noqotay Umaradii (أمراء) kuwii ugu sarreeyay uguna dambeeyay ee soo mara Maktabadii galbatay ee Alexandria. Aqoontii insaaniyaddii qummaneyd ee dhexdhexaadka mar walba ah ahaan jirey, Isla jeerkaana ka didsaneyd jahliga iyo indho la’aanta ay ku jirto bulshadeeda waxa ay noqotay aakhirkii mid sababtay dhimashadeeda.
Waqtigaa aqoonyahan Haybaatiya waxay ku soo beegmatay xilli ay xaalad waalan oo xagjirnimo diimeed ahi ka jirtey guud ahaanba Alexandria. Diinta masiixiga ayaa markan si weyn u faafaysay, Haybaatiya waxaa lagu tuhmay diinlaawenimo (Ilxaadnimo) iyo inay ku kufriday Diintoodi samaawiga ahayd ee Masiixiyadda. Waana sababihii ugu weynaa ee loo dilay Iftiinkii Alexandria ee Haypatia Theon!
Xilligaa maktabaddii ugu weyneyd dhulkaa, kasmooyin kala duwan, daahqaadyo iyo baadhitaanno baaxad weyni ku kaydsanayeen waa ay gubeen. Sida Taariikhdu sheegto mutadayiniintii maktabadda ku qamaamay waxa ay gubeen in ka badan 6,000,000 oo duub aqooneed, kuwaas oo lagu kaydiyey goobtaas. Waxaa ka dhacay magaalada wax aan taariikhda hore u soo marin, mar laga metelay qisada aqoonyahanadda iyo jawigii deegaankaa ee xilligaa, Filmka (Agora) ayaad ka dheehan kartaa muuqaallo argagax leh, muuqaalkaas lagu muujinayo xaaladdii xilligaa ayaa ah mid dadka badi murug gelinaya, mid qof kasta oo damiir iyo damqasho leh uu ka xishoon lahaa burburinta maktabaddaa muggaa lahayd.
Haybaatiya inanta Film-ka Agora shakhsiyaddeeda ku metelaysa, waa Rachel Weisz jilaaga Ameerikaan-biritishka ah e, ayaad filimka ka dhex arki iyada oo uu dagaalkii bilowday, albaabkana cadawgu u taaganyahay, Isla jeerkaana ay soo dhowaatay xilligii kayd-aqoonka oo dhan la waayi lahaa, dadkuna ay nafohooda la wada cararayaan. Ayaa ay iyadu uruursanaysaa buugaagtii meesha taalley inta ay ka karto markaas. Hadba mid ayay la booddaa, mid kale oo qiima leh ayeey aragtaa oo qaaddaa, haddana mar kale ayaa mid ka dhacaa, waa dareen qiiro leh.
Haybaatiya waa la dilay! Lama dilin oo keliya ee dil kii ugu foosha xumaa ee Aadame la mariyo ayaa la mariyey. Dharka ayeey ka dhigeen, waa ay qaawiyeen dulleeyeen iyada oo qaawanna dhagax la dhaceen! Jiidhkeedii iyo haraggeedii ayay kala saareen, Kaddib intii hadhay waxa ay sudheen goob ka mid ah Alexandria, sida la sheego Intaas oo qura kagama ay hadhin e, muddo kaddibna waa ay gubeen! Halkaas ayay ku galbatay Hibadii wanaagga badnayd iyo dayaxii qurxoonaa ee u dhashay Alexandria.
Qisada Boqoraddan ifka timid ee galbatay ragga wax ka qoray waxaa kamid ah qoraagii weynaa ee; Yuusuf Seydaan (رواية عزاريل) oo qisadan si weyn uga hadlaysa. Sidoo kale sannadii 2009-kii ayaa laga metelay qisadeeda mid kamida Aflaamta ugu qaalisan maanta dunidan casriga ah ee dhacdooyinkii tagey weriya (Agora-2009). Haybaatiya (Hypatia) waxay ahayd nal u baxay Alexandria dabadeed ay si yar uga takhaluseen.
Qisadan Haybaatiya waxay innoo caddeynaysaa in xagirnimada diimeed, masiixiyadda iyo Islaamka labadaba noqdeen caqabaddaha ugu weyn ilbaxnimada ummadeed, fekerka xorta iyo aqoonta. Filim taxane ah oo farriinta uu xanbaarsan yahay ay tahay nacaybka ay dadku u qabaan tasaa’ulka (is weyddiinta) ayaa laga jilay. Waa xalqado is dabayaal ah oo ka warramaya inan yar oo Jamshiid loogu yeedhi jirey, deegaan khuraafaadka diimeed ee indho la’aanta ahi ku xoogaystay ayuu ka soo jeedaa, kolkaad u fiirsato waxaa ku soo baxaysa maan la’aanta iyo harawsiga lagu hayo bulshadaas dulleysan ee bilaa admiral noqotay.
Mar kale Haybaatiya waxay tusaale fiican u noqonaysaa haweenka adduunka ee af duubka ugu jira dhaqamada iyo caadooyinka guunka ah ee diimeysan. Haybaatiyadii 1500 oo sanno ka hor sidaa u fekeraysay, caalamka oo aan Technology-dda aynnu u jeedno maanta lahayn, deegaankii adkaana ku noolayd, aqoonta maaddiguna aanu saameyn weyn ku lahayn khuraafaadkuna yahay midka mudnaanta kowaad la siiyo; waa wax laga xishoodo in aan la helin weli xilligan casriga ah gabadh buuxisa meeqaamkii cadceeddaa galbatay.
WQ: Khadiija Maxamed Jaamac “Eeshiya”